DHEGEYSO-Xagee maraysaa qabanqaabada xuska 1da Agoosto. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Xagee maraysaa qabanqaabada xuska 1da Agoosto.
Luulyo 31, 2016 3:12 b 0
Garoowe, July 31 2016–Waxaa Maalin qur ah oo maanta ah ay naga xigtaa waqtigii dhidibada loo taagey Puntland iyadoona sanad walba 1da bisha agoosto la xuso aasaaska Puntland oo hadda 18 sano jirsatey.
Hadaba qaab nooce ah ayaa sanadkaan loo xusayaa kowda agaas, yaa ka qaybgeli doona, maxayse kaga duwanaan doontaa xusitaanadii hore oo loo samayn jirey, arrimahaasi oo dhan waxaa Daljir uga waramay afhayeenka xukuumadda Puntland Quraan jece.
DEG DEG Xarunta hayda CID-da ee magaalada Muqdisho oo laweeraray.